Izinhlobo Nezinhlobo > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Thayipha 2 ushukela ekudleni
Uhlobo 2 lwe-Diabetes Diet Konke okuqukethwe kwe-iLive kuhlolwe ngochwepheshe bezokwelapha ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu kakhulu nokuvumelana namaqiniso. ...
Umehluko phakathi kohlobo lokuqala nesibili lwesifo sikashukela
Thayipha isifo sikashukela esingu-1 bese uthayipha isifo sikashukela esingu-2: umehluko muni? Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esisanda kuzwakala kuwo wonke umuntu. Noma ngabe lesi sishayo asikaze sikuthinte, kufanele ukhumbule ukuthi akekho ophephile kwisifo sikashukela. ...
Akufani, kepha akunangozi kangako: isifo sikashukela sezinso nakho konke okuhlobene nakho
Akufani, kepha akunangozi kangako: Isifo sikashukela sezinso nakho konke okuhlobene nakho. Bambalwa abantu abazi ukuthi ukugula okunje ngesifo sikashukela kunezinhlobo ezahlukahlukene ezihluke kakhulu komunye nomunye. ...
Ukukhulelwa nokukhulelwa kwengane kushukela
Ukukhulelwa kanye nokuzalwa kwengane kusifo sikashukela Esikhathini esingengakanani esidlule, ukukhulelwa nesifo sikashukela bekuyimiqondo engahambelani. Ukukhulelwa kusongela impilo yowesifazane, kanti ukushona kwengane kufinyelele kuma-60%. Kodwa-ke, namuhla isimo sesishintshile. ...
Ukudla kwesifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe - ama-nuances akhethekile wokudla esikhathini esibaluleke kangaka sikamama esizayo
Ukudla ngesifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe - ama-nuances akhethekile ekudleni esikhathini esibaluleke kangaka sikamama esizayo.I-5% yabesifazane abakhulelwe batholakala benesifo sikashukela sokukhulelwa. ...
Yini i-honeymoon yesifo sikashukela: kungani ibonakala futhi ihlala isikhathi esingakanani?
Yini i-honeymoon yesifo sikashukela: kungani ibonakala futhi ihlala isikhathi esingakanani? Ingabe Uhlobo Lokuqala Lwesifo Sikashukela Lungenzeka? Kungenzeka yini ukuthi ngemuva kokuqala kokwelashwa nge-insulin isidingo sayo siyoncipha kakhulu noma siphele ngokuphelele? ...
Isifo sikashukela sohlobo lokukhulelwa 1
5. Izici zesifundo sikashukela i-mellitus ngesikhathi sokukhulelwa. Inkambo yesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa ibonakala ngokusebenza okukhulu kanye nomlingiswa onjenge-wave, ukuthambekela okwandayo kwe-ketoacidosis ne-hypoglycemia. ...
Umzimba, ukhulelwe ushukela - uyini futhi welashwa kanjani?
Umzimba, ukhulelwe ushukela - uyini futhi welashwa kanjani? Ngesikhathi sokukhulelwa, umzimba wowesifazane uthola izinguquko eziningi. ...
Isifo sikashukela seLabile: siyini, kungani senzeka nokuthi selashwa kanjani
I-10 gestational pyelonephritis
Ishukela likashukela liboniswa futhi liphathwe kanjani?
Isifo sikashukela se-Steroid: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa Isifo sikashukela seSteroid yisifo esibi kakhulu, okuluhlobo lwesifo sikashukela. Elinye igama laso yisifo sikashukela sesibili esincike ku-1. ...
Ukwanda ushukela ngesikhathi sokukhulelwa: yini eyingozi nokuthi ungayinciphisa kanjani
Ubungozi bokwehla kwamazinga kashukela kubesifazane abakhulelwe? Umama okhulelwe kufanele enze konke ukuhlolwa okudingekayo nokuhlaziya ngesikhathi esifanele. ...
Thayipha isifo sikashukela esingu-1 - zonke izinhlobo zolwazi
Uhlobo 1 isifo sikashukela - yonke inhlobo yolwazi Isifo esingathi sína - uhlobo 1 lwesifo sikashukela asishiyi ukukhetha esigulini: ukuze asinde, kumele amukele ukugula kwakhe futhi afunde ukuthi angaphila kanjani nakho. Udokotela waseRoma u-Areteus, owayephila ngekhulu le-1 A.D. ...
I-mellitus yesifo sikashukela esingakhanswanga Enye yezifo eziyingozi kakhulu ze-endocrine yisifo sikashukela. Lesi yisilonda esinzima sezicubu ze-pancreas, ezibhekele ukwenziwa kwe-insulin ye-hormone. ...
Ukuzivocavoca ngesikhathi sokukhulelwa: yini eziwusizo, ezivunyelwe nezinqatshelwe
Ukuzivocavoca ngesikhathi sokukhulelwa. Ukukhulelwa kusenesikhathi - ongakwazi, ongakwazi ukukukwenza Ukubaluleka kokuzivocavoca umzimba ngesikhathi sokukhulelwa kusenesikhathi kufakazelwe. ...
DIABETES: INYANGA EYODWA
"I-honeymoon" yesifo sikashukela sohlobo 1. Ungayandisa kanjani iminyaka eminingi Ngesikhathi sokutholwa kwabo, ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, ushukela wegazi uvame ukwenqabela. ...
Isifo sikashukela: izimbangela, izimpawu, ukuxilongwa nokwelashwa
Izimpawu zesifo sikashukela kubantu besifazane nasekwelashweni ...
Isifo sikashukela se-Gestational Gestationalabetes siyindlela ekhethekile yesifo sikashukela ekhula kubantu besifazane ngesikhathi sokukhulelwa ngenxa yokungalingani kwe-hormonal. ...
Uhlobo 1 isifo sikashukela: izimpawu, izinkinga, ukwelashwa okufanele
Uhlobo lwe-1 isifo sikashukela: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa Uhlobo lwe-1 yesifo sikashukela (isifo sikashukela esincike ku-insulin) yisifo se-endocrine esibonakala ngokukhiqizwa okunganele kwe-insulin ye-hormone ngamaseli we-pancreas. ...